Binance Coin oovimba-Funda ukurhweba
tag: IChinance Coin
I-Binance Coin (i-BNBUSD) Ixabiso liyazama ukuhlukana neNqanaba eliBalulekileyo le-503 yeedola.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-BNBUSD-Okthobha 29
Ukukwazi ukuphula inqanaba lokumelana ne-$ 503 kunokunyusa ixabiso kwi-$ 599 kunye ne-$ 678 izinga lokumelana. Ukungakwazi ukuphula ngaphezu kwenqanaba lokumelana ne-$ 503 kunokunciphisa ixabiso lemali ye-Binance kwi-$ 430, i-$ 364 kunye ne-311 yeedola.
Amanqanaba okubonelela: $ 503, $ 599, $ 678
Amanqanaba emfuno: $ 430, $ 364, $ 311
Kwimbonakalo yexesha elide, i-BNBUSD ikwimeko entle. I-Binance Coin ifumene inkxaso kwizinga le-$ 311 ngoSeptemba 28. Iqhuma ukuze iphule i-$ 364 kunye namanqanaba e-$ 430. Ukubuyiselwa kwexabiso kuye kwenziwa. Ukunyakaza kweBullish kwabuyiselwa ngo-Oktobha 11 kwaye ukunyuka kwexabiso lokuvavanya inqanaba le-$ 503 ngo-Oktobha 20. Ihoxise emva kweveki edlulileyo ukuvavanya kwakhona inqanaba lokuxhasa i-$ 430. Izolo, ikhandlela le-bullish yemihla ngemihla lenziwe ukutyhala ixabiso elingaphezulu kwe-430 yeedola.
Itshati yemihla ngemihla ye-BNBUSD, Okthobha 29
I-EMA ehamba ngokukhawuleza (amaxesha ayi-9) ihlala ingaphezulu kwe-EMA ehamba kancinci (amaxesha angama-21). I-Binance Coin ithengisa ngaphezu kwee-EMA ezimbini ezibonisa ukuba iinkunzi zenkomo zibambelele kwimarike. Ukukwazi ukuphula inqanaba lokumelana ne-$ 503 kunokunyusa ixabiso kwi-$ 599 kunye ne-$ 678 izinga lokumelana. Ukungakwazi ukuphula ngaphezu kwenqanaba lokumelana ne-$ 503 kunokunciphisa ixabiso lemali ye-Binance kwi-$ 430, i-$ 364 kunye ne-311 yeedola.
Ingqekembe yeBinance ikwintshukumo ye-bullish kwitshathi yeyure ezi-4. I-Crypto ivavanye inqanaba lenkxaso ye-430 yeedola ngo-Oktobha 27, iibhere azikwazanga ukutyhala ixabiso ngakumbi. Ikhandlela elinamandla le-bullish elenziweyo elibonisa ukuphazamiseka kweenkunzi zenkomo. Ingqekembe inyuka ukuya kwinqanaba lokumelana ne-503 yeedola. Izama ukuhlehla okwangoku.
Itshathi ye-BNBUSD yeeyure ezi-4, nge-29 ka-Okthobha
tags IChinance Coin, Marketing, Uhlalutyo Technical
I-Binance (BNBUSD) Ixabiso: I-Bears Chasa iiBulls kwinqanaba le- $ 503, Ukunyuka kwamaxabiso okuLindelweyo
Uhlalutyo lwamaxabiso e-BNBUSD-Septemba 17
Ixabiso lingahla liye phambili ukuya kuthi ga kwi-364 yeedola zangaphambili. Kwimeko apho, ikhandlela lemihla ngemihla livaliwe ngezantsi kwenqanaba elikhankanyiweyo, emva koko, amaxabiso anokuhla aye kuma-311 eedola nakuma-254 amanqanaba enkxaso. Ukuba iinkunzi zeenkomo ziye zaphula inqanaba lokumelana ne- $ 433, amaxabiso anokufikelela kwi-503 kunye ne- $ 599 kumanqanaba okuxhathisa.
Amanqanaba okubonelela: $ 433, $ 503, $ 599
I-BNBUSD i-bearish kwimbonakalo yexesha elide. Iibhere zibambe kwimarike yeBinance Coin; le meko yaqala xa ingqekembe ifikelele kwinqanaba lokumelana ne-503 yeedola nge-23 ka-Agasti. Iinkunzi zeenkomo azikwazanga ukwahlula isithintelo kwinqanaba elichazwe apha ngasentla. Iibhere zafudukela kwimarike ngamandla; Oku kuqatshelwe ngokwenziwa kwekhandlela le-bearish elomeleleyo elityhala ixabiso liye kwinqanaba lokuxhasa lama- $ 364. Inqanaba lenkxaso liyala ixabiso kwaye liqala ngokuhamba ngokuhamba.
Itshati yemihla ngemihla ye-BNBUSD, nge-17 kaSeptemba
I-Binance Coin iyaqhubeka nokuthengisa kwayo ingezantsi kwee-EMA ezimbini ezibonisa ukuba amabhere alawula imarike ngelixa ii-EMA ezihamba ngokukhawuleza (amaxesha ama-9) zihlala zingaphantsi kwe-EMA ehamba kancinci (amaxesha angama-21). Ixabiso lingahla liye phambili ukuya kuthi ga kwi-364 yeedola zangaphambili. Kwimeko apho, ikhandlela lemihla ngemihla livaliwe ngezantsi kwenqanaba elikhankanyiweyo, emva koko, amaxabiso anokuhla aye kuma-311 eedola nakuma-254 amanqanaba enkxaso. Ukuba iinkunzi zeenkomo ziye zaphula inqanaba lokumelana ne- $ 433, amaxabiso anokufikelela kwi-503 kunye ne- $ 599 kumanqanaba okuxhathisa. Isalathi samandla esihambelanayo sikumanqanaba angama-40 agobayo ajonge phezulu abonisa uphawu lokuthenga.
Ingqekembe yeBinance ikukuhamba kwe-bearish kwitshathi yeeyure ezi-4. Emva kokudityaniswa okwenzekileyo kwinqanaba lokumelana ne- $ 503. Iibhere zanqoba iinkunzi kwaye ixabiso lancipha ngokukhawuleza kwinqanaba lokuxhasa le- $ 364. Yabuyisa umva ukuze iphinde ibonwe ephezulu yangaphambili. Ingqekembe ngoku iyancipha kwinqanaba lokuxhasa i-364 yeedola.
I-BNBUSD 4 itshathi yeeyure, ngoSeptemba 17
I-Binance Coin ithengisa ngaphantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA abonisa ukuba abathengisi babuyela kwintengiso.
Ixabiso leBinance Coin (BNBUSD) Abathengisi bayala ukwenyuka kwamaxabiso kwinqanaba lama- $ 364
Uhlalutyo lwamaxabiso e-BNBUSD-ngoMeyi 28
Uxinzelelo ngakumbi kubathengisi luya kuyityhalela phaya phantsi iBinance Coin yokwaphula inqanaba lenkxaso leedola ezingama-311 ezinokuthi zinciphise ukuya kuthi ga kumanqanaba angama-254 kunye nama-196 eedola. Ukungakwazi ukophula inqanaba lenkxaso ye-311 yeedola ngamabhere, i-BNBUSD izophula i-364 yeedola kwaye imeko yokuqhubela phambili inokuqhubeka ukuya kumanqanaba oxhathiso kwi- $ 420, kunye ne- $ 503.
Amanqanaba okumelana: $ 364, $ 420, $ 503
Amanqanaba enkxaso: $ 311, $ 254, $ 196
I-BNBUSD yexesha elide: Ukuthwala
Ingqekembe yeBinance yi-bearish kwitshathi yemihla ngemihla. Iibhere zihlala zibambelele kwimarike yemali yeBinace. Isantya se-bearish sityhale ixabiso le- $ 254 yenqanaba ngaphambi kokubuyela umva. Inqanaba lenkxaso ye-196 yeedola liyavavanywa kwaye amaxabiso ayancipha, abuyiselwe umva ukuze abuyise kwakhona inqanaba lama- $ 364. Ukunyuka kwamaxabiso okuqhubekayo kuthintelwa kwinqanaba lokumelana namandla. Okwangoku yehla ukuya kwinqanaba lama- $ 311.
Itshathi yemihla ngemihla ye-BNBUSD, ngoMeyi 28
Amandla ebhere ayakhula kwimarike yemali yeBinance. Kuyathengiswa ngezantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 EMA emva kokuwela umndilili wokuhamba ngokukhawuleza kunye nomndilili wokuhamba kancinci. Ixesha lamaXabiso aMandla aHlanganisiweyo ixesha le-14 likumanqanaba angama-40 kunye nemigca yomqondiso ekhombe ezantsi ukubonisa uphawu lokuthengisa. Uxinzelelo ngakumbi kubathengisi luya kuyityhalela phaya phantsi iBinance Coin yokwaphula inqanaba lenkxaso leedola ezingama-311 ezinokuthi zinciphise ukuya kuthi ga kumanqanaba angama-254 kunye nama-196 eedola. Ukungakwazi ukophula inqanaba lenkxaso ye-311 yeedola ngamabhere, i-BNBUSD izophula i-364 yeedola kwaye imeko yokuqhubela phambili inokuqhubeka ukuya kumanqanaba oxhathiso kwi- $ 420, kunye ne- $ 503.
I-BNBUSD i-bearish kwitshathi yeeyure ezi-4. Abathengisi bayala umbandela ophikisayo ovela kubathengi. Ixabiso lavavanya inqanaba lenkxaso le- $ 196 nge-23 kaMeyi, ukunyuka kweebhere akuphumelelanga kwaye ikhandlela le-pin bar lenziwe kwinqanaba elifanayo elibonisa uxinzelelo oluvela kwiinkunzi. Ixabiso lenyuke laya kuthi ga kwinqanaba lama- $ 364 emva kokungena kwinqanaba lamaxabiso angama- $ 323. Iibhere zikhusela inqanaba lama- $ 364 kwaye ixabiso liyancipha ukubuyisa inqanaba lamaxabiso angama- $ 311.
I-BNBUSD iiyure ezingama-4, ngoMeyi 28
Ingqekembe yeBinance ithengisa ngaphantsi kwamaxesha ali-9 e-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA emgama abonisa ukonyuka kwamandla ebhere.
I-Binance Coin (BNB) ikhusela iNkxaso yangoku, inyukela phezulu uye kwi-16 yeedola
Ukuhlaziywa: 12 January 2020
Amanqanaba okuGxila aphambili: $ 22, $ 26, $ 30
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 12, i-$ 8, i-$ 4
I-BNB / iXabiso leDola yeXesha elide iTrend: Bullish
I-Binance Coin yawela ezantsi kwi-12 yeedola kwaye yadityaniswa ngaphezulu kwayo. Emva kwethutyana, i-BNB iqale ngokunyuka ukuya phezulu njengoko iinkunzi zeenkomo ziye zaphuka ngaphezulu kwee-EMA. Ingqekembe kulindeleke ukuba inyuke njengoko ixabiso likwindawo yokuqhubela phambili. Ekubuyiseleni emuva, ngo-Okthobha, ixabiso laphula umgca we-downtrend kwaye lavalwa ngaphezulu.
Kwakucingelwa ukuba i-BNB ikummandla we-bullish. Nangona kunjalo, imeko yokuqhubela phambili yayihlala ixesha elifutshane njengoko ingqekembe yagxothwa kwi- $ 21. Ukunyanzeliswa kokuthengisa kwaqala kwakhona njengoko imali iwele kwi-12 yeedola. Ukunyuka kwangoku kunokwenzeka ukuba kujongane nokumelana ne- $ 16 kunye ne- $ 20. Nangona kunjalo, ukuba iinkunzi zeenkomo ziyawoyisa la manqanaba, ingqekembe iya kuba ngaphandle kwendawo yedowndrend.
Ingqekembe inokwenzeka ukuba inyuke njengoko imivalo yamaxabiso ingaphezulu kwee-EMA. I-stochastic ibonisa ukuba intengiso ingaphezulu kwenqanaba lama-60%. Oku kuchaza ukuba ingqekembe ikwisantya esiphezulu. Nangona kunjalo, ukuba amaxabiso aphula ngezantsi kwe-EMAs, uxinzelelo lokuthengisa luya kuphinda luqhubeke.
I-BNB / USD I-bias yexesha eliphakathi: Ukuphelisa
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ingqekembe yemali yayihamba ngokugudileyo ukusuka kuJanuwari 3. Ukunyuka okuyekisiweyo kwapheliswa nge-15.50 yeedola. Ingqekembe yehle isezantsi yeedola ezili-14 yaza yacebisa enye inyathelo lokunyusa. Ukuphindaphinda okwesibini kwenza ukuba ingqekembe ibuye.
I-Index ye-Relative Strength Index (RSI) ye-14 kwinqanaba lama-63 libonisa ukuba ingqekembe ikummandla we-bullish. Ngaphandle koko, ingqekembe iya kuphakama njengoko ingaphezulu komgangatho osembindini wama-50. Ixabiso libuyela emva kokumelana ne- $ 15.50. I-BNB iya kulahla ukuba ixabiso liwela ngaphantsi komgca wenkxaso. Nangona kunjalo, ukuba inkxaso iyabanjwa, iinkunzi zeenkomo ziya kuqhubeka novavanyo lwazo oluphezulu lokuchasana nentloko.
I-Binance Coin (BNB) itshati ephilayo ekhoyo
I-Binance Coin ngoku ithengisa kwindawo yokuqhubela phambili. Ingqekembe inokuthi inyuke kodwa inokujamelana ne- $ 16. I-BNB iya kujongana ngaphezulu kwe-20 yeedola ukuba iinkunzi zeenkomo ziphumelele ukunganyangeki kwi- $ 16. Ukusilela ukwaphula ukunganyangeki kuya kunyanzela ingqekembe ukuba iwe. Ngamanye amagama, imarike iyakuphinda ihlole inkxaso yangaphambili kwi $ 12.
Umqondiso woRhwebo lweBinance
Ixabiso lokungena: $ 15
Yeka: $ 12.50
Ithagethi: $ 22
tags IChinance Coin, BNB, BNB / USD, Uhlalutyo lwamaxabiso
I-Binance Coin (BNB) ihlawulela kwiiLinge zokuzama ukunyuka
Ukuhlaziywa: 13 Disemba 2019
Amanqanaba okuGxila aphambili: $ 22, i-$ 26, i-$ 30
I-BNB / iXabiso leXabiso leXesha elide: UkuHamba
I-Binance Coin ithengise ngaphezulu kwexabiso ngeedola ezili-14 ukusukela nge-22 kaNovemba. Imarike yenkomo yaqala nge-26 ka-Okthobha xa iinkunzi zeenkomo zaphula umgca wokumelana nexabiso livaliwe ngaphezulu kwayo. Nangona kunjalo, imeko yokuqhubela phambili yayihlala ixesha elifutshane njengoko yayixhathisiwe kwixabiso lama- $ 22.
I-BNB iphinde yawa kwinqanaba eliphantsi elingaphezulu kwe- $ 14. Njengoko ingqekembe idibanisa ngaphezulu kwenkxaso kwi-14 yeedola, kukho amathuba okuba ixabiso lenyuke okanye liye ezantsi. Nangona kunjalo, ukuba iibhere zigqobhoza ngaphantsi kweedola ezili-14, i-BNB iya kuqhubeka nokuhla kwenkxaso elandelayo. Kwakhona, ukuba amaxabiso aphuka ngaphezulu kwe- $ 16 kwaye igcinwe ingqekembe iya kunyukela kwinqanaba lexabiso lama- $ 22.
Ixabiso lihamba ngaphezulu komgca wokumelana ukuba iibhere ziyaqhekeka ngaphantsi komgca wokumelana, ingqekembe iya kuphinda iqhubeke nokuhamba kwayo. Ixesha le-RSI kwinqanaba le-14 lama-33 libonisa ukuba imarike isondela kummandla ogqithileyo.
I-BNB / USD I-bias yexesha eliphakathi: Ukutshintsha
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-BNB yawela ezantsi kwi-14 yeedola, kwaye inyuka uye kuvavanya umgca wokumelana ukuze uyaphule. Iinkunzi zeenkomo zenze iinzame ezintathu zokungavumi kodwa zaphikiswa kwaye ingqekembe yaqala kwakhona ukuhamba kwayo ecaleni kwenkxaso. Okwangoku, ixabiso livavanya inkxaso kodwa i-BNB iyabuya. Ingqekembe kulindeleke ukuba ihlale iintsuku ezimbalwa.
I-BNB ithengisa ngaphezulu kwe-50% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Oku kuthetha ukuba imarike ikwisantya esiphezulu. Ngexesha lokungazinzi, ukuxhathisa kunye neendlela zokuxhasa ziyakwazi ukwaphulwa. Ii-SMAs zitshibilika ngokuthe tye oko kuthetha ukuba ingqekembe ikuluhlu.
Ingqekembe ngoku ikwindlela esecaleni njengoko imeko ye-bearish iphelisiwe. Ixabiso liya kuqhubeka ukuhla kwiintsuku ezimbalwa ezide kude kuphume ingqekembe kuluhlu. Abarhwebi banokubeka iiodolo ezisalindelweyo ngokulindela ukuphuma.
Ixabiso lokungena: $ 14
Oku kunokuba sisiqalo seRally yeXesha elide yeBhinance Coin (BNB)
Ukuhlaziywa: 14 Novemba 2019
Amanqanaba aphikisayo aphambili: $ 20, $ 24, $ 28
I-Binance Coin ibisoloko ikwi-bullish mkhuba emva kokunyanzelwa kokugqibela kwe-bearish ngoSeptemba 24. Imarike yehla yaya kuthi xhaxhe kwi-16 yeedola kwaye yaqala kwakhona imeko ephezulu. Okwangoku, ijongene nenkcaso kwinqanaba lexabiso lama- $ 21.
Ngo-Okthobha, iinkunzi zeenkomo zenze iinzame ezingaphumelelanga zokwaphula inkcaso kwi $ 21. Ixabiso liya kubuyela ezantsi kwi-20 yeedola ukuba lenze umzamo wokuchasana. Namhlanje, ixabiso liyabuya emva kokusilela ukoyisa inqanaba lokumelana. Nangona kunjalo, ukuba iinkunzi zeenkomo zilophule inqanaba lokumelana, i-BNB iya kujongana ngaphezulu kwexabiso lama- $ 23. Okwesibini, i-BNB iya kuba ngaphandle kwendawo yedowndrend.
I-BNB okwangoku ikwi-crossover ye-bullish, i-21-day SMA ingaphezulu kwe-50-day SMA, ebonisa ukuba amaxabiso ayenyuka. Oku kungqinwe liXesha laMandla aNxulumene naMandla ixesha le-14 kwinqanaba lama-63 ukuba ingqekembe ingaphezulu kwe-50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, intengiso inyuka iye kwiindawo eziphakamileyo zangaphambili. Ixabiso liya kuvavanya kwinkxaso yomgca wendlela yokuqhubeka nokunyuka kwawo. I-Binance Coin ngoku ikwi- $ 21 yokuphikisa ngaphezulu. Le yayiyinkxaso yangaphambili ngo-Septemba apho iibhere zaqhekeka kwaye intengiso yawela ezantsi kwi-16 yeedola.
Namhlanje, imarike ibuyela umva ukusuka kwinkcaso yentloko. Ukuba amaxabiso abuyela umva kwaye aphule ngezantsi kweentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs, i-BNB iya kuba kumda we-bearish. Olu luxinzelelo lokuthengisa olunokuqhubeka kwakhona. Nangona kunjalo, ukuba amaxabiso aqhekeza ngaphantsi komgaqo wendlela yokuqhubela phambili, imeko ephezulu iyekiwe. Ingqekembe ikummandla othengwe ngaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Oku kuthetha ukuba intengiso ikwi-bearish umfutho.
I-Binance Coin (BNB) iya kuphinda iqhubele phambili ukunyuka kwayo emva kokubuyela kwenye kwakhona. Iinkunzi bezisokola ukumelana nokophula ngaphezulu kwayo. Ingqekembe ayinamandla okuthenga kwinqanaba eliphezulu lamaxabiso. Into elungileyo kukuba intengiso ibisoloko ibuyela kwinkxaso ye-21-yeentsuku ze-SMA ukuze iphinde ibekho.
Ixabiso lokungena: $ 20.93
Yeka: $ 16.0
Ithagethi: $ 23
tags IChinance Coin, BNB, IBNBUSD, Uhlalutyo lwamaxabiso